China Dry mica powder ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
I-Huajing grade grade Muscovite powder isebenzise i-mica flake evela eLingshou Lubaishan Mineral, esifundazweni sase-Hebei. Indima yemvelo yeMuscovite mica isebenza ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokumboza kusukela ekuzuzeni kwayo kwezomnotho.
I-mica powder eyomile ilungele ukumakwa komgwaqo, ukwakha upende wangaphandle wodonga, ukhonkolo, ukumelana nokugqwala, njll.Ingadlala kahle izinzuzo zemicah isakhiwo sokwakheka kwezinto ezimbili, ithuthukise izakhiwo zomshini wefilimu yokumboza, nokulwa nokuqhekeka Umsebenzi wayo omuhle wokuvikela i-UV ungathuthukisa ikhono lesimo sezulu lokumboza.
I-Mica eyomile (Ukulungiswa 、 Ukulingiswa）
D-60 Isiliva elimhlophe 80 kuya ku-83 170 ＞ 98 ＜ 300 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.28
D-100 Isiliva elimhlophe 82 kuya ku-86 120 ＞ 98 ＜ 300 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.28
D-200 Isiliva elimhlophe 82 kuya ku-86 68 ＞ 98 ＜ 300 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.25
D-300 Isiliva elimhlophe 83 ～ 86 50 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.22
D-400 Isiliva elimhlophe 84 kuya ku-88 45 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.22
Ukumboza Ibanga Elomile Ground Mica Powder
I-mica powder eyomile ilungele ukumakwa komgwaqo, ukwakha upende wangaphandle wodonga, ukhonkolo, ukumelana nokugqwala, njll.Ingadlala kahle izinzuzo zemicah isakhiwo sokwakheka kwezinto ezimbili, ithuthukise izakhiwo zomshini wefilimu yokumboza, nokulwa nokuqhekeka Umsebenzi wayo omuhle wokuvikela i-UV ungathuthukisa ikhono lesimo sezulu lokumboza .Isakhiwo se-chip singathuthukisa kahle amanzi, ukumelana nosawoti, ukumelana ne-asidi ne-alkali, futhi sisetshenziswa kakhulu ekuhlanganisweni kwamanzi nokususelwa kumakhemikhali.
I-Mica powder ifaneleka kakhulu njengesengezo samapende nezingubo, njengokugcwalisa okunye okuhlukile.Ingathuthukisa kakhulu ukusebenza okulwa nokuguga kwengubo, kuthuthukise isimo sezulu sokumboza, kuvimbele ukuqhekeka, ukushintsha kombala, ukubambezeleka kwe-powdering, okwasemkhathini ukuguga ukumelana, ukumelana okuqinile njalonjalo. Ukumboza okungangeni manzi, ukumelana nokugqwala, ukuvikela ukugcwala, ukumelana nomlilo, ukumboza uphawu lomgwaqo, ukumboza ukungcola, ukumelana nokushisa okuphezulu, enye ingubo ekhethekile. Ukungeza okugcwalisa amaminerali okungajwayelekile ezintweni ze-polymer kungathuthukisa noma kuthuthukise izakhiwo zezinto zokwakha futhi kwehlise izindleko zokukhiqiza, ezinethemba elithembisayo ekukhiqizeni nasekusetshenzisweni kwezimboni. Ukuphakama kwe-mica powder ekulungisweni kwe-lacquer kunesikhundla esingenakubekwa ndawo samanye ama-filler angavamile.Ngoba ama-mica flakes athanda ukuqondaniswa ngokufana nendawo yefilimu yopende, kwakheka ungqimba oluqinile futhi oluguquguqukayo lokulwa nokugqwala kanye ne-anti-ULTRAVIOLET. Ngasikhathi sinye, ngoba ishidi le-mica powder livalwe imbobo ezacile yefilimu yopende, ukufana kwengcindezi yokumboza kungathuthukiswa, ukuze kuthuthukiswe ukumelana nefilimu okuqhekezayo, ukumelana nesimo sezulu, ukumelana ne-acid ne-alkaline, indawo ebushelelezi nenhle, njll.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ze-mica, umhlabathi owomile we-mica powder usetshenziswa kakhulu ekuhlanganisweni kwezimboni, njengokumboza okungenamlilo, ukumbozwa kokushisa, ukwakha ukugqoka, ukukhipha ukugoqa njalonjalo, i-mica ekuhlanganiseni i-akhawunti ye-10-20%.